मोदीको स्वागतका लागि सिगारिदै जनकपुर फोटोमा हेर्नुस ! - मोदीको स्वागतका लागि सिगारिदै जनकपुर फोटोमा हेर्नुस !
मोदीको स्वागतका लागि सिगारिदै जनकपुर फोटोमा हेर्नुस !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २6 बैशाख, 11:58:06 AM
काठमाडौँ / भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चनाका गर्ने भएपछि रातारात जनकपुर फेरिदै गएको छ । वालपेन्टिङले मिथिला कला झन्कने गरी १२ बिगे वरपरको सौन्दर्य बढाएको छ । वरिपरि गेरुवा रंग लगाएर सजाउने काम धमाधम भैरहेको छ । मञ्च निर्माणका, १२ विगाको मैदान वरपरको साजसज्जा र स्वागत द्वारहरु निर्माण तिब्ररुपमा भैइरहेको छ।
यति बेला जनकपुर उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारसमेत मोदीको स्वागत भब्यरुपमा होस् भनेर खुलेर जनकपुर सजावटमा लागेका छन् भने रातारात सडक कालोपत्रे भएका छन्। मंगलबार रातीसम्म अर्को तर्फको समेत कालोपत्रे गरि बुधबार विहान सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सडक विभाग र नगरपालिकाका प्राविधि र कर्मचारी कम्मर कसेर लागेको स्थानियबासीले बताए ।
दीपावली झै गरी जनकपुरका प्रत्येक पोलहरु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पोष्टरहरु झकिझकाउले सजिए टासिएका छन् । दुवै देशको झण्डाहरु मुल गेटमा टांगिएका छन् । आम मानिसलाई १२ विगेमा मोदीको भाषण सुन्न र कार्यक्रम हेर्न आउदा कुनै दस्तुर नलाग्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । मोदी ओने भएपछि यतिबेला बजारमा निकै चहलपहल बढेको छ ।
पछिल्लो तालिका अनुसार बैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पटनाबाट हेलिक्टरमा बिहान ९ बजे १२ विगे मैदानमा उत्रिएपछि करीब तीन सय मिटर पूर्वमा रहेको जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चनाका लागि पुग्ने छन् । उनले मन्दिरमा ४५ मिनेट विताउने छन् ।
त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदीले संयुक्त रुपमा रामायण सर्किटको उद्घाटन गर्ने छन भने अयोध्या र जनकपुरबीचको बस सेवा संचालनको सुभारम्भ समेत गर्ने छन् । मोदी जनकपुर करिव २ घण्टा आम सर्वसाधारणलाई सम्बोधन र मन्दिरको पुजा सकेपछि काठमाडौ आउने तय भएको छ ।
२०७५, २6 बैशाख, 11:58:06 AM